आज संसद बैठक बस्दै, कसरी प्रस्तुत होला एमाले ? « News24 : Premium News Channel
आज संसद बैठक बस्दै, कसरी प्रस्तुत होला एमाले ?
काठमाडौं । आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।
बैठक भने सहजै संचालन हुने संभावना देखिँदैन । आजको बैठक पन अवरोध गर्ने मुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तयारी रहेको छ । एमालेकै विरोधका कारण बुधबार तीनपटकसम्म बैठक अवरोध भएको थियो । बैठक पटकपटक अवरोध भएपछि सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले आजको लागि बैठक बोलाउनु भएको हो ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदका बुधबार उठाएको विषय निरन्तर जारी राख्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा पूरानै अनुत्तरित प्रश्नहरू कायमै छन्, सभामुखले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिदा सम्म प्रश्न सोधिरहन्छौँ, सभामुखले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोचेका छन्, हामी त्यसको निरन्तर प्रतिवाद गर्छौँ ।’
तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने सांसदलाई सभामुख सापकोटाले कारवाही नगरी १४ दिनसम्म रोक्नुभएको थियो । भट्टराईले सभामुख पार्टी विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
बुधबारको संसद बैठकमा एमालेले संविधान, नियम, नीति, विधि उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरिएको भन्दै सभामुखसँग जवाफ माग गरेको थियो । लगत्तै सभामुख सापकोटाले आफूले प्रचलित कानूनका आधारमा निर्णय लिएको जवाफ दिनुभएको थियो ।